Ahụmahụ Semalt na-akọwa otú e si mụọ spam sitere na spam
Michael Brown, Onye Ọrụ Nlekọta Ndị Ọrụ nke Ụlọ ọrụ Ọrụ Ntanetị, edepụtala ụfọdụ n'ime ihe ndị dị mkpa banyere emume spam.
E zigara ozi spam mbụ na 1994. N'oge ahụ, Laurence Canter na Margaret Siegel dere otu ihe omume nke gosipụtara mgbasa ozi maka ọrụ ụlọ akwụkwọ ịgba chaa chaa ụlọ ọrụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ha zipụrụ ozi a niile na ndị niile nọ na Usenet News Group, ma e nwere ihe karịrị puku mmadụ iri isii natara ozi a.
N'ihi ụzọ pụrụ iche e si zite ozi ahụ, ndị ahịa Usenet enweghị ike ịchọta mbipụta abụọ ahụ, ndị ọrụ ahụ na-ahụkwa mbipụta nke ozi ndị ahụ n'otu ìgwè. N'oge ahụ, ọ bụghị ndị nkịtị na-ejikwa ịntanetị na ihe onwunwe n'ịntanetị. Ọzọkwa, ịnweta Usenet dị nnọọ ọnụ karịa ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị ọrụ chere na ozi ndị yiri ahia na-abaghị uru ọ bụla. Ọ bụghị nanị na ha ejiri oge ha kama ha ejikwa ego buru ibu nye ndị ọrụ.
Ka oge na-aga, kaadịadị ndụ akwụkwọ ndụ na-emetụta onye ọ bụla. Arnt Gulbrandsen mepụtara echiche nke ịkagbu aha, nke e mesịrị tụnyere ọdịnaya nke ozi nke spam ozi. N'ikpeazụ, e zigara ya onye zitere mbụ maka nkwenye. Canter na Siegel ugboro ugboro ugboro ugboro. Ndị ọrụ agaghị ejikọta spam ahụ ma ghara ịkagbu ozi na server Weenet..A na-ewerekwa ihe ndị na-emegide mmadụ, ma ihe niile bụ n'efu.
Ọ bụ naanị mmalite nke spam azụmahịa na Usenet spam. Tupu April 1994, Sedar Argic zara ya ọtụtụ ozi na-ekwu na ọ gọnahụ mmegbu nke Armenia. O doro anya na ọ bụghị mkpebi amamihe dị na ya, ihe niile dị mkpa ka ọ gbanwee.
Ụdị mmalite nke Usenet spam bụ ozi a na-ezigara ọtụtụ ndị ọrụ na ịntanetị. N'aka nke ọzọ, Cancelbots rụkwara ọrụ ahụ ma gbalịa ịchọpụta isi iyi ha. N'ikpeazụ, oge ruru mgbe Usenetters jiri nkà na ụzụ dị elu chọtara ngwọta maka nsogbu a. Ọkà mmụta sayensị Russia bụ Andrey Markov mepụtara bot na 1913 ma jiri ọtụtụ peeji nke ịmepụta nzacha.
Ọ naghị ewe ndị spammers oge ịghọta na a kpochapụrụ ihe ndị ahụ na-agbanye site n'ịgbakwunye junks random na njedebe nke ozi ọ bụla. N'oge ahụ, ndị spammers kpaliri Usenet gaa n'ọtụtụ ozi ịntanetị, na-achọpụta na ha na-awakpo ụdị IDs niile na Europe na Europe. Ọtụtụ ndị ọzọ raara onwe ha nye n'ichepụta ọdịdị nke spam ma gbalịa ịlụso ndị spammers ahụ n'Ịntanet ọgụ. Ebumnuche ndị mmadụ na-emeghị ka ebumnuche nke ịchọta àgwà nke ndị na-agba ọsọ na ịntanetị. Azụlite teknụzụ ọhụrụ, a gbakwara ọtụtụ spammers na ndị sava ha. N'aka nke ọzọ, ndị spammers kwupụtara nsogbu ahụ ma mepụta nkà na ụzụ dị mma karịa nke a. Ha mepụtara usoro megide nzacha nke Google Analytics.
Nye ndị spammers, Bayesian kere ozi iji mee ka ndị ọrụ kwenye na ha bụ ndị ziri ezi na ndị a pụrụ ịtụkwasị obi. E kere ụdọ ogologo na mkpụmkpụ okwu ndị na-enweghị ncheta, usoro a wee ghọọ ihe nkịtị na ebe nile n'oge na-adịghị anya.
Na 2010, Amazon wepụtara eBook ụlọ ahịa online, na ya na ihe nkesa na idei mmiri na ọtụtụ spammers. Ka ọ dị ugbu a, a nabatara ọtụtụ usoro iji zụọ ọtụtụ ndị spammers na ndị omempụ online Source .